အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: သင်္ကြန် မုန့်လက်ဆောင်းလုပ်ရအောင်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, April 15, 2012 Sunday, April 15, 2012 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီနေ့ မဟာသင်္ကြန်ရဲ့ ဒုတိယအကြတ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ လည်လို့ရတဲ့သူတွေက လည်ကြပြီး မလည်နိုင်တဲ့သူတွေက အိမ်မှာ ငိုင်နေတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် မြန်မာ့ရိုးရာ မုန့်လက်ဆောင်း လုပ်စားရအောင်လားနော်။ မုန့်လက်ဆောင်းဆိုရာမှာ မုန့်ဖတ်လေးတေကို အများအားဖြင့် ဈေးထဲကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝယ်မရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ လုပ်စားဖို့ ခက်ပြီပေါ့နော်။ အဲဒီလို ဝယ်မရရင် မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်စားလို့ဖြစ်အောင် မုန့်လက်ဆောင်း လုပ်နည်းကို ပြန်လည် မျှဝေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် မုန့်လက်ဆောင်းဖတ် လုပ်ချင်သူ၊ ပြည်ပရောက်နေလို့ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ် ဝယ်မရသူများအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
မုန့်လက်ဆောင်းလုပ်ဖို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်က လုပ်မဲ့ဆန်ဟာ ဆန်မာ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဆန်ပျော့ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ် မရနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာဆန်ဆိုရင် မနော်ဟရီလို ဆန်အမာစားမျိုးမှ လုပ်လို့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရှိရင်တော့ ဆန်ကို အမှုန့်ကြိတ်စက်ကို ပို့ပြီး ကြိတ်ခိုင်းလို့ ရပေမဲ့ ပြည်ပက လူတွေအတွက်တော့ အမှုန့်ကြိတ်ဖို့ ခက်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ Blender လေးနဲ့ဘဲ အဆင်ပြေအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ထုံးအရည်ကြည် ထည့်ကာ မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ကျိုပေးပါမယ်။ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်အတွက် ထုံးအရည်ကြည်ကလည်း မဖြစ်မနေ ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် မဟုတ်ရင် မုန့်ဖတ် ခဲမှာ မဟုတ်လို့ပါ။ မီးဖိုပေါ် တင်ထားတုန်းမှာလည်း အောက်မှာ အနည်ထိုင်ပြီး ခဲမသွားအောင် အဆက်မပြတ် မွှေပေးရပါမယ်။ အကယ်၍ မုန့်ဖတ် အစိမ်းရောင်လေးဖြစ်ချင်ရင် ဆွမ်းမွှေးရွက်လို့ခေါ်တဲ့ Padan Leaves ကို စက်နဲ့ကြိတ်လို့ ရလာတဲ့ အစိမ်းရောင် အရည်တွေကို မုန့်ကျိုတုန်း ရောထည့်ပေးရင် အစိမ်းရောင် မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်တွေ ရနိုင်ပါတယ်။
မုန့်လက်ဆောင်းဖတ် ညှစ်မဲ့ ဇွန်းအကြီးစားတွေပါ။
ပျစ်နေအောင်ကျိုထားတဲ့ မုန့်ဖတ်တွေကို ဆန်ကာပေါက်ပါတဲ့ ဇွန်းထဲကို နည်းနည်းစီ ထည့်ပြီး ဇွန်းနောက်တစ်ချောင်းနဲ့ ခပ်သာသာလေး ဖိနှိပ်ပေးရင် မုန့်တွေဟာ ဆန်ကာပေါက်ကနေ စိမ့်ကျပြီး အောက်က ရေအေးအေးထဲ ကျသွားပါမယ်။
အခုလို မုန့်ဖတ် အစိမ်းရောင်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်မက မြန်မာပြည်မှာအသုံးများတဲ့ သစ်ခွ ဖျော်ရည်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ရေခဲနဲ့ စ်ိမ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်.
ဒါဆိုရင် ချိုချိုအေးအေး အနံ့မွှေးမွှေး မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်လေး ရပါတယ်။
အုန့်နို့ကို နို့ဆီ၊ သကြား၊ ဆားအနည်းငယ်တို့ဖြင့် အချိုရည် ဖျော်ပြီးရေခဲတွေထည့်ကာ အေးအောင်ထားထားပါတယ်။
မုန့်လက်ဆောင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အဆာပလာတွေပါ။ အမဲရောင်က ငချိပ်ပါ။ မရှိလျှင် မထည့်ဘဲနေလို့ရပါတယ်။ အဝါရောင်က နှမ်းကို မညက်တညက် ထောင်းထားတာပါ။ ပန်းကန်လုံးအသေးနောက်တစ်ခုမှာ နှင်းရည်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ နံသာပု အရည်ကို ရေနဲ့ရောထားတာပါ။ ကျွန်မတို့ကတော့ နံသပွတ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မုန့်လက်ဆောင်းမှာ အဲဒီအရည်လေးပါမှ မွှေးကြိုင်ပြီး သောက်လို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ အုန့်နို့နဲ့ မသောက်ချင်ဘဲ ထန်းညက်ရည်နဲ့ သောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ထန်းညက်ရည်ကျိုပြီး အုန့်နို့အစား ထည့်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
မုန့်ဖတ်၊ အုန့်နို့ရည်၊ နှမ်း၊ ငချိပ်၊ နံ့သာပုရည် စသည်တို့ စုံအောင်ထည့်ပြီးပြီမို့ သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်နေတဲ့ မုန့်လက်ဆောင်းကို ရပါပြီရှင်။
ကြွလာတဲ့ မိတ်သဟာများအားလုံးကို မုန့်လက်ဆောင်းလေး ဒါနပြုလိုက်ပါရစေနော်။ အားလုံးလည်း အတာကူးမှာ အထူး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပြီး သင်္ကြန်ရေလို အေးမြကာ ဆန္ဒအားလုံးပြည့်ဝကြပါစေရှင်။
16 Responses to “သင်္ကြန် မုန့်လက်ဆောင်းလုပ်ရအောင်”
Happy Myanmar New Year!!
သောက်ပါမယ်ဆို လုပ်ထားတာပဲပြထားပြီး မုန့်လက်ဆောင်းတစ်ခွက်အသင့်သောက်ဖို့ကျ မတင်ပေးထားဘူး ကြည့်ပဲကြည့်ပြီး သွားရေကျပေါ့နော်...( ရပါတယ် ကိုယ့်ဘာသာပြင်ပြီးသောက်သွားတယ် :)))
ခုလို မုန့်လက်ဆောင်းလုပ်နည်းလေးပါ စိတ်ရှည်လက်ရှည်တင်ပြပေးတာကို .. အစအဆုံးဖတ်ရင်း.. အားပေးခဲ့ပါတယ်.. ဘာဖြစ်ဖြစ်.. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်စားတတ်ပြီပေါ့.. ကျေးဇူးပါရှင်။
တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး သေချာတော့ဖတ်ခဲ့တာပဲ
(စကားမစပ် ဆန်တိုဟူးလဲ ဒီလိုပဲလုပ်ရလားဟင်)
စားချင်လိုက်တာ နေထိုင်လို့ကောင်းပြီး အားတဲ့အခါမှ
လုပ်စားကြည့်မယ် မေ့သွားရင်လဲ ပြန်လာဖတ်မှာပေါ့နော်
လုပ်စားဖို့ ကြံသေးတယ်။အဲ့လိုအဖတ် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ အစ်မ တော်လိုက်တာ.။ ကျေးဇူးအစ်မရေ.။
မကြီးချောကတော့ အစုံကိုလုပ်တတ်ပါလား...အရင်က မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်လုပ်တာကိုတော့မြင်ဘူးတယ်..အဲလို တစ်ဆင့်ချင်းတော့မမြင်ဘူးဘူး ...ကျေးကျေးပါ မကြီးချော....
အရင်က စားနည်းပဲ သိတာ။ :D
နှစ်သစ်မှာ မချော မေမေ၊ ဖေဖေ မိသားစုအားလုံး ပိုလို့တိုးတက်အောင်မြင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
အင်း.. နည်းလမ်းလေးရသွားပြီ.. ကျေးဇူးပါ မချောရေ.. အဟီး.. လုပ်စားဦးမယ်.. . ဟဲဟဲ...
လုပ်စားမယ် လုပ်စားမယ် မကြီးရေး))
အညာမှာတော့ မုန့်လက်ဆောင်းညှစ်တာက တစ်မျိုး ဒေါ်ချောရေ...
နို့ဆီခွက် အဖုံးသတ္တုပြားကို အပေါက်လေးတွေဖောက်ထားတာကို ပိတ်စသန့်သန့်ထဲမှာထည့်ထားပြီး မုန့်ဖတ်ထည့်ပြီး ညှစ်တာပဲ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတူတူပါပဲ ဟုတ်ဖူးလား...
မုန့်လက်ဆောင်းကို ထန်းလျက်ရည်လေးနဲ့ ကောက်ညှင်းလေး၊ နံ့သာပုဆီလေးနဲ့ပဲ ခံတွင်းလိုက်တယ်...နို့ဆီတွေနဲ့တော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး...
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ပြောကြည့်တာပါ...တကယ်တော့ မုန့်လက်ဆောင်းနဲ့ဝေးတာ ဆယ်နှစ်း(
မုန့်လက်ဆောင်းကို တခါမှ ငချိပ်နဲ့ မစားဖူးဘူး၊ မချောက တကယ်တော်တယ်၊ ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရအောင်လုပ်တတ်တယ်...။ Cheers..!! :)
ထုံးအရည်က ဘယ်လောက်ထဲ့ရ ပါသလဲ? ဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါသလဲ? English လို လေးပါပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးပါပဲ။
မုန့် လက်ဆောင်းကို ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ ရမှန်း သိတော့တယ်..လုပ်သားဦးမယ်..